ကိုက်နိုင်ရင်ကိုက်... | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » နည်းပညာ » ကိုက်နိုင်ရင်ကိုက်...
ကိုက်နိုင်ရင်ကိုက်တဲ့.. ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီး..ဘာများပါလိမ့်လို့ထင်သွားမယ်ထင်တယ်..။ ဟုတ်တယ်
ကိုက်နိုင်ရင်ကိုက်တဲ့. ဘာကိုကိုက်ရမှာလဲ..။ တကယ်တော့စာဖတ်သူတို့ကိုကိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး.။
ကိုက်မယ့်သူက သတ္တ၀ါလည်းမဟုတ်ပါဘူး.။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်စိန်ခေါ်ထားတဲ့ အရာက. ကွန်ပျူတာ
ဗိုင်းရပ်စ်ရယ်လို့ သမုတ်ထားတဲ့.. ပရိုဂရမ် ငယ်လေးများသာဖြစ်ပါတယ်..။
ကျွန်တော်တိုက်စည်း သင်တန်းတက်တုန်းက. ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် ကွန်ယက်လုံခြုံမှု ဆိုတဲ့
ခေါင်းစဉ်နဲ့ စာတမ်းတင်ခဲ့ဖူးတယ်.။ အဲဒီတုန်းက ရေးခဲ့ဖူးတယ်..။ ဟိုးအရင် ဗိုင်းရပ်စ်ပေါ်ပေါက်လာပုံ.ဘာညာ
ပေါ့ဗျာ။ဟိုးအစဦးဆုံး Creeper တို့ကအစ.အခုနောက်ဆုံးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ မကွေးလို့ခေါ်တဲ့ မြန်မာပြည်ဖြစ်ဗိုင်း
ရပ်စ် တွေအထိပါပဲ.။ကျွန်တော် နည်းပညာဆိုင်ရာတွေသိပ်မရေးချင်ဘူး .။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူငယ်ချင်း
တစ်ယောက်ကပြောဖူးတယ်.။နည်းပညာဆိုတာ ဆိုရှယ်ကဏ္ဍတွေထဲမှာ ရောရေးရင် ပညာပြတာ.နဲ့တူတယ်
ဆိုလို့ ပါ.။ကျွန်တော်လည်း ပညာရယ်လို့သတ်သတ်မှတ်မှတ်လည်းပြစရာမရှိပါဘူး.။ကိုယ်ဖတ်ဖူး ၊ မှတ်ဖူး ၊
ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်တွေကို ပထမဆုံးစတင်အသုံးပြုတာက အခုလို အနှောက်အယှက်ပေးဖို့ ၊ ဖျက်
ဆီးဖို့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး.။ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ မူရင်းအဓိက Main Method ကကို..မိမိဘာသာ Copy ပွားနိုင်ဖို့လုပ်ထားတာ
ပါ.။ တစ်နည်းအားဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်၇မယ်ဆိုရင်. ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်တို့မည်သည် မိမိတို့ဖာသာ ကော်ပီပွား
ယူနိုင်သော ဖိုင်များဖြစ်ကြပါတယ်.။ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိတယ်.။ ဘယ်လိုကောင်က ဘယ်လို
သွားတယ် ဆိုတာတွေထည့်မပြောတော့ပါဘူး..။အဲဒါတွေက နည်းပညာပိုင်းကအစ်ကိုတွေတော်တော်များ
များလည်းရေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် အာဘော်သာကွာသွားပြီး ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲ ထပ်နေမှာစိုးလို့ပါ.။
စောစောက ခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့အတိုင်း ကိုက်နိုင်ရင်ကိုက်ဆိုတော့..ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ နည်း
လမ်းလေးတွေကိုသာ. အဓိကထား ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.။
၁။ မိမိကွန်ပျူတာမှာ Update ဖြစ်တဲ့ Antivirus ကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိရမယ်..။လက်ရှိမှာ ကမ္ဘာ့အကောင်း
ဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတာကတော့Kasperskyပါပဲ. ။ ဒီကောင်က ပထမဆုံးစထုတ်တုန်းက.ရုရှားနိုင်ငံ
ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဆာဗာတွေအတွက်သီးသန့်ထုတ်ခဲ့တာပါ.။နောက်ပိုင်းမှ သီးခြားပြန်ထုတ်
တာဖြစ်ပါတယ်.။Kaspersky (ကတ်စပါစကီ) ဆိုတာလည်းရုရှားနာမည်ပါ.. .။တစ်ချို့လူတွေက ကတ်စပါ
စကိုင်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်.။ ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ မူရင်းအမည်ကို ရုရှားစာနဲ့ရေးထားတဲ့အခါ ကတ်စပါစကီးလိုပဲ
ရေးပါတယ်..။ကျွန်တော်ကတော့ လောလောဆယ် Avast6ကိုသုံးနေပါတယ်.။ဒီကောင်လေးကပေါ့လည်း
ပေါ့ပါတယ်.။သုံးရတာလည်းအဆင်ပြေလို့ပါ.။ပြီးတော့ Offline Update လုပ်ရတာလည်းလွယ်လို့ မြန်မာ
၂။အင်တာနက်မှ အာမခံချက်မရှိတဲ့ ပရိုဂရမ်အသေးလေးတွေ.၊ဂိမ်း ၊ ပုံ စသည့်မက်လုံးတစ်ခုခုပေးကာဒေါင်း
ခိုင်းတဲ့ ဆော့ဝဲ အသေးစားလေးတွေရှိပါတယ်.။ဒီကောင်တွေက ဘာမှ မဟုတ်ပေမယ့် သိပ်ကိုဒုက္ခပေးပါ
တယ်..။မိမိကွန်ပျူတာမှာ Spam တွေတက်လာတာမျို့. ။ ကြော်ငြာတွေဝင်လာတာမျိုးတွေကိုခေါ်လာတတ်
ပါတယ်.။ ပိုဆိုးတာက. Backdoor လိုဟာမျိုးတွေပါလာတာပါ.။ Backdoor ဆိုတာက စာဖတ်သူတို့ကွန်ပျူ
တာကို နောက်ကနေ မလွယ်ပေါက်ကို ဖွင့်ပေးမယ့် အရာပေါ့..။ Backdoor ချပြီးသွားရင်.ဘယ်လိုပဲပတ်စ်
၀တ်ပြောင်းပြောင်း.Backdoor ပေါက်ကနေပြန်ဝင်ပြီး လိုချင်တာကိုအသာလေးနှိုက်သွားနိုင်တာပေါ့.။
ဒါ့ကြောင့် Download ပက်စက် ခြင်းဟာလည်း ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ.။
၃။ USB Devices များ၊ CD များကို Scan ဖတ်ပြီးမှ ဖွင့်တာကောင်းပါတယ်.။ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ရှိသဗျ..။
မိမိရဲ့ အန်တီဗိုင်းရပ်စ်က Virus Definition က Update မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ ညာဖက်ကလစ်ထောက်ပြီး
ဘယ်ကွန်မန်းမှ မပေးမိစေနဲ့..။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ .. ဗိုင်းရပ်စ်ကို အသက်သွင်းမယ့် Autorun.inf ဆိုတဲ့
ဖိုင်လေးထဲမှာ“ညာဖက်ကလစ်ထောက်ပြီး ကွန်မန်းတစ်ခုခုကိုနှိပ်ပါက ဤ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ဖွင့်ပါ”ဆိုတဲ့မြန်မာ
စကားနဲ့ အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့ Command တစ်ခု ပါတတ်လို့ပါ.။သိပ်ရှုပ်မှာစိုးလို့ ထည့်မရေးတော့ဘူး.။
တကယ်စိတ်ဝင်စားရင် ကျွန်တော့်ဆီက ရေးသားနည်းတောင်းယူနိုင်ပါတယ်.။အခုတစ်ချို့လူတွေရေးသား
အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့်ဒီလောက်ပါပဲ.။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တစ်ခု အကြံပေးချင်တာကတော့..။
USB များဒါမှ မဟုတ်. CD များထည့်သွင်းရပြီဆိုရင်.. Run box ကနေသွားတာက အန္တရယ်ကင်းပါတယ်.။
ဥပမာပြရရင်. USB က Drive G: ဆိုပါတော့..ဒါဆိုရင် Run Box ကနေ G: လို့ရိုက်လိုက်ရင်သူ့ဖာသာ ပွင့်
ပြီးရင် ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ Enter ခေါက်လိုက်ပေါ့..။သူ့ဖာသာပွင့်လာပါလိမ့်မယ်.။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်သုံးတဲ့ဝင်းဒိုးက ၀င်းဒိုး7 ဆိုရင် အကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့် Windows XP ဆိုရင်တစ်ခုရှိတာ
က Chrome ဗိုင်းရပ်စ်လိုမျိုး၊ မကွေးဗိုင်းရပ်စ်လိုမျိုးကောင်တွေက ဖိုဒါအတုတွေဆောက်ပြီးရှိနေတတ်တယ်.။
တကယ်တမ်းက ဖိုဒါမဟုတ်ပါဘူး..။ ညာကလစ်ထောက်ပြီးProperties ကြည့်ရင် Application လို့ပေါ်နေ
ပါတယ်.။အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီကောင်တွေကို ဘုမသိဘမသိ ဖိုဒါပဲကွဆိုပြီး.. ဒဘယ်ကလစ်ပေးလိုက်
ရင်တော့ သေပြီဆရာပဲ.။ဒီကောင်တွေရဲ့ သဘောသဘာဝကိုက အဲဒီလိုပါ.။ ဖိုဒါအစစ်တွေကို Super Hidden
ပေးထားပါတယ်.၊ပြီးတော့ ဖိုဒါအတုပုံစံနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်အပွားလေးတွေကိုအပြင်ထုတ်ထားတယ်.။မှားပြီး Run
မိလိုက်ရင်သေပြီဗျာ..။အဲဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို အရင်ရှင်းပြပါ့မယ်.။
ပထမဆုံး windows + R နှိပ်ပြီး..Run Box ကိုခေါ်လိုက်ပါ..။
ပြီးရင် cmd လို့ရိုက်ပြီး. Command Prompt ကိုခေါ်လိုက်ပါ.။
ပြီးရင် CD သို့မဟုတ် USB ရဲ့ Drive Letter ကိုရိုက်ထည့်ပါ.. ။ဥပမာ G ဆို G: ပေါ့. H ဆိုရင် H: ပေါ့ဗျာ..။
နောက်က : လေးကိုတော့မမေ့ပါစေနဲ့.။
ကျွန်တော် USB Drive က J မို့လို့ပါ..။အဲဒီလိုဖြစ်သွားရင်အောက်မှာ..
Attrib -s -a -h -r *.exe လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ..။
Attrib ဆိုတာက Attribute ကိုပြောတာပါ..။ -s ဆိုတာက System file တွေကို System အဖြစ်ကနေရပ်စဲပါ
တဲ့.။ အရှေ့က အနုတ်လက္ခဏာလေးဆိုတာ.. ဖျက်တာ၊ မလုပ်တာ ၊ ရပ်စဲတဲ့သဘောပါ.။ နောက်.က
-h ဆိုတာကလည်း hidden ချထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို Hidden မချနဲ့တဲ့.။ -a ဆိုတာကလည်း Archived လုပ်
ထားတဲ့ကောင်တွေကို Archived မလုပ်ပါဘူးလို့ပြောတာ.။ -r ဆိုတာ က Read Only ကိုပြောတာ.။ + ဆိုရင်
ပြောင်းပြန်ပေ့ါဗျာ..။ *.exe ဆိုတာက. * ဆိုတာ မည်သည့်နာမည်ဖြစ်ဖြစ် တဲ့.။ နောက်က. .exe ကတော့
exe extension နဲ့ကောင်ကိုပြောတာ တဲ့..။ ( ဟူး.. မောတယ်...)
အဲဒီလိုလုပ်လိုက်တော့ အထဲကကောင်တွေ. ပုန်းတဲ့ကောင်တွေ ပေါ်လာပြီ.၊ ကန့်သတ်ထားတဲ့ကောင်တွေ
attrib -s -a -h -r *.com ( တစ်ချို့ဗိုင်းရပ်စ်တွေ .com ဖိုင်နဲ့လာတယ်.. ။ဥပမာ သရက်မြို့ ၊ လွိုင်ကော် အစရှိတဲ့
attrib -s -a -g -r *.pif (အချို့ က Pif နဲ့လာတယ်ဗျား..)
attrib -s -a -h -r *.vbs ( အချို့က VB script လေးနဲ့လာတယ်ဗျား. ဥပမာ နိုးနိုးဂျက်မဆိုတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်က VB
Del *.exe /s /q လို့ရိုက်
Del * com /s /q လို့ရိုက်
Del *.pif /s /q လို့ရိုက်
Del *.Vbs /s /q လို့ရိုက်
enter ခေါက် လိုက်ပေါ့.။
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်.။ Del ဆိုတာက Delete ပေးတာ.။ /s ဆိုတာက Sub directory ထဲအထိ.၊(အတွင်းဖိုဒါ
တွေထဲထိ ၀င်ဖျက်ပါ..) /q ဆိုတာကတော့ Yes No ပြန်မမေးနဲ့ တစ်ခါတည်းဖျက်တဲ့.. ။ (ကောင်းရော. ကျွန်
တော်က နားလည်လွယ်အောင် ဘာသာပြန်ပေးလိုက်တာပါ..သူ့ကွန်မန်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေပေါ့.။ )
ကာကွယ်တာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ.. မတော်တဆ ကိုက်သွားရင်ကော ဘယ်လို လုပ်မလဲ ပေါ့.
အဲဒီအခါမျိုးကတော့ အကောင်းဆုံးက Update အဖြစ်ဆုံးနဲ့. Boot Time Scan ပါရှိတဲ့ Anti-virus တစ်
ခုခု ကိုတင်ပြီး စကင်ဖတ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ..။ Manual ရှင်းချင်ရင်ကျတော့..
-ကွန်ပျူတာကို Restart ချ..။
-ပြန်တက်လာရင် F8 ကီးကိုနှိပ်.။
-Safe mode with Command Prompt ကနေ၀င်..။
ဘာဖြစ်လို့ Safe Mode ကနေ၀င်ရလဲ ဆိုရင်. ။ Safe Modeမှာက.. Start Up မှာ ဗိုင်းရပ်စ် ပရိုဂရမ်တွေအလုပ်
မလုပ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်.။ တကယ်သာ လုပ်နေခဲ့ရင်ကိုယ်ဖျက်တာနဲ့ Reload လုပ်ပြီး သူ့ဖာသာပြန်ရောက်လာ
-cd \_ လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ရင် အောက်ပုံလိုဖြစ်သွားမယ်.။
အဲဒီအခါ နောက်မှာ အခုလိုရိုက်ပေးရမယ်..။
dir /ah /s /p /b *.exe လို့ရိုက်ပေးပါ..။
- အဲဒီမှာ ကိုက်နေတဲ့.ဗိုင်းရပ်စ်နာမည်နဲ့ သူ့ရဲ့ လမ်းကြောင်းကိုပေါ်လာပါတယ်....။
ဒါပေမယ့် Manual ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့.. သူ့ကို ဖော်ဖို့နဲ့. တည်နေရာတွေမှာ လိုက်ဖျက်ဖို့ အဆင့်တွေအများ
ကြီးကျန်ပါသေးတယ်.။ (ဆက်ပြောရမလား..။ ငြီးငွေ့နေပြီလား..။)
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်. Anti Virus နဲ့ Boot Time Scan ဖတ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားတာများပါတယ်. ။ သို့ပေ
မယ့် အချို့သော အ ဖျက်စွမ်းအားကြီးတဲ့. Chrome လိုမျိုးကောင်တွေ.၊ Loikaw လိုမျိုးကောင်တွေကျတော့
မူရင်း WIndows ရဲ့ system ဖိုင်တွေကိုပါဖျက်ဆီးပစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အားလုံးဟာ ဗိုင်းရပ်စ်အဖြစ် သိမ်း
ပိုက်ခြင်းခံရသလို..။ Scan ဖတ်လိုက်ရင်လည်း ပါသွားတာများပါတယ်.။ အခြေအနေအရမ်းဆိုးရင် ၀င်းဒိုးပါ
တကယ်တော့ ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်ကို Manual ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့..။ Windows ရဲ့ Batch Language
ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် .. အနည်းဆုံးသိထား ပိုင်နိုင်ထားဖုိ့လိုပါလိမ့်မယ်.။ ကိုယ့်ဖက်က ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်.. နက်
၀က်ချိတ်မထားတဲ့ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးအနေနဲ့..။ အန်တီဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာ မလိုအပ်လှပါဘူး.။
အားလုံးပဲ မိမိရဲ့ အဖိုးတန်တဲ့ ဆော့ဝဲတွေနဲ့ ဒေတာတွေကို ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်
နိုင်ကြပါစေဗျာ..။တကယ်လို့ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ရင်. . ကျွန်တော့်ကို ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ ကျန်းမာချမ်းသာပြီး.. ဗိုင်းရပ်စ်ပြဿနာမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေဗျာ..။
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 4:42 AM
Posted by မိုးသက် at 4:42 AM Read more
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် April 1, 2012 at 9:01 AM
ရင်ဆူး April 3, 2012 at 7:40 AM
You better study about IT as professional. Good job & keep learning about IT ;)